Companieslọ ọrụ teknụzụ, kacha baa uru n'ụwa | Androidsis
Cristian Garcia | 19/10/2021 16:09 | Emelitere ka 20/10/2021 10:13 | Noticias
Ụlọ ọrụ teknụzụ na -agbanwe agbanwe oge niile, nke mere na ụdị ụdị taa niile abụrụla ihe kacha baa uru n'ụwa. Ọ bụrụ na anyị na -aga ogo ụlọ ọrụ ugbu a 8 n'ime 10 ebe ahụ raara nye mmepe nke ngwaahịa teknụzụ, ya bụ, ha na -arụpụta ma chepụta mbadamba ihe anyị, iPads, ekwentị mkpanaaka na ngwa niile anyị na -eji kwa ụbọchị wee mee ka ndụ anyị dị mfe. Ọtụtụ afọ gara aga, ụdị ụlọ ọrụ ndị ọzọ dị ka ụlọ ọrụ ego ma ọ bụ mmanụ bụ isi na ahịa ngwaahịa.
N'ime afọ 50 gara aga, ụlọ ọrụ teknụzụ arịgoro n'elu. Ugbu a ha na -ere ahịa maka ihe ha bụ, ụlọ ọrụ kacha baa uru n'ụwa. Ajụjụ bụ, ọ bụ ha kacha jiri ndị na -azụ ahịa kpọrọ ihe? Maka na ọ bụ otu ihe ịnọ n'elu ahịa ngwaahịa gị na ihe ọzọ bụ ịma ihe ndị ahịa gị chere maka gị. Ma ọ bụrụ na ihe dị mkpa na ịntanetị bụ ịmara echiche gbasara ụlọ ọrụ tupu ịmalite onwe anyị ịzụta ngwaahịa nke ụdị ọ bụla. Anyị na -enweta ekele a maka ndị na -azụ ahịa ndị zụrụla ebe ahụ ma jiri ngwaahịa ha kwa ụbọchị. Dịka ọmụmaatụ, enwere ọwa mmiri dị ka GoWork nke na -enye anyị echiche ma ọ bụ nyocha dị iche iche sitere n'aka ndị ọrụ na ndị na -azụ ahịa gbasara ha niile na ngwaahịa ha. Ọbụnadị maka ndị ọrụ, ọ bụrụ na ịhọrọ ọnọdụ n'ime ụlọ ọrụ ndị a ma chọọ ịma ka ọ si arụ ọrụ n'ezie.
Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ndị a erutela ebe ha bịara, ọ bụ n'ihi na ha abanyela ndụ anyị n'ụzọ nkịtị, ruo n'ókè nke na anyị enweghị ike iche n'echiche ụbọchị anyị taa na -enweghị otu ngwaahịa ha. Kedu ihe ọzọ, bụ onyinye kpakpando a na -erekarị n'ime ahia n'oge ekeresimesi, ndị eze na mmemme ndị ọzọ. Ma ọ bụghị na ọ dị mkpa na ọ ga -abụ na ụbọchị pụrụ iche na ezumike nwere onyinye, mana a na -erekwa ha n'ọtụtụ buru ibu n'afọ. Maka nke ahụ, ọ dịkwa mma ịnwe n'aka ezigbo onye ntụnyere dị ka nke anyị tụlere na mbụ. N'ebe ahụ ị nwere ike ịhụ echiche gbasara mmemme niile yana nke kacha mma sitere n'aka ndị na -azụ ahịa.
1 Complọ ọrụ teknụzụ kacha mma nke 2021
1.1 Companieslọ ọrụ iri kacha elu na 10: teknụzụ na -eduga mgbanwe ahụ
Complọ ọrụ teknụzụ kacha mma nke 2021
Dị ka akụkọ akụkọ akụkọ akụkọ Statista akụkọ ifo ugbu a, ugbu a 8 n'ime ụlọ ọrụ iri kacha baa uru n'ụwa dịka ọnụ ahịa ahịa ngwaahịa ha siri dị, ewepụtara maka mmepe nke ngwaahịa teknụzụ yana azụmahịa ya na nkesa ya. Ihe a niile bụ n'ihi na akụnụba ụwa anyị agbanweela nke ukwuu n'ahịa ọ bụla (nke nsogbu ụwa niile gara aga n'afọ 2008). Ọzọkwa, naanị ihe kpatara ọrịa na -efe efe bụ na ojiji teknụzụ niile na -eme ngwa ngwa karị yana yana uru ụlọ ọrụ ndị a. Anyị apụtaghị na nsogbu ọ bụla zuru ụwa ọnụ ụlọ ọrụ ndị a na -emeri, naanị na ngwaahịa ha bara uru ma nye uru.
Dịka anyị gwara gị, nke a bụ ihe na -egosipụta na ọkwa kachasị ama n'ụwa, ugbu a, anyị ga -enye gị data ewepụtara na Statista. Nke a bụ mgbanwe na ọkwa a nke na -ewere otu oge nke 2005 ma jiri ya tụnyere afọ anyị ugbu a, n'oge ahụ n'ọkwa a. naanị ụlọ ọrụ teknụzụ abụọ batara: Vodafone na Microsoft. Ozizi evolushọn ahụ mere n'afọ ndị na -adịbeghị anya dị egwu.
Companieslọ ọrụ iri kacha elu na 10: teknụzụ na -eduga mgbanwe ahụ
Na -aga ozugbo na data ahụ, na 2021 anyị na -ahụ ụlọ ọrụ mmanụ na ụlọ ọrụ ego n'ime ọkwa: Saudi Arabian Oil Company na Berkshire Hathaway. Ihe ọ bụla na -eso abụọ ndị a nwere njikọ na mgbanwe teknụzụ ebe ọ bụ na ha bụ ụlọ ọrụ na ngwaahịa ha dị na ndụ anyị. Nke ahụ bụ ikwu, ụlọ ọrụ kacha baa uru na ọkwa teknụzụ bụ Apple, nke dị ugbu a na ijeri ijeri $ 2,25. Apụl ka nọ n'isi.
Ndị na -abịa n'azụ wee banye n'elu 3 bụ: Microsoft nọ n'ọkwa nke abụọ ($ 1,96 trillion) na Saudi Aramco ($ 1,89 trillion). Ọ bụ ihe nwute maka Jeff Bezos, Amazon nọ n'ọkwa nke anọ nwere nnukwu ego nke dịkwa oke elu (ijeri dọla 1,71). Ha mechachara ọkwa Alphabet, Facebook, na mgbakwunye ịbanye n'ụlọ ọrụ China Tencent Holdings. Ọ bụkwa Tesla sitere na Elon Musk, Alibaba (onye nwe Aliexpress) na n'ikpeazụ Berkshire Hathway.
Ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị a nwere ike mara gị nke ọma na ndị ọzọ nwere ike ha agaghị ama ihe ha na -ere, n'agbanyeghị o yikarịrị ka ị nwere ma ọ bụ na -ejide otu ngwaahịa ha n'aka gị. Ma ọ bụ na ị zụrụ ozugbo site na otu ndị enyemaka ya. Na nkenke, enwere ike ịsị na ha bụ ụlọ ọrụ na -achịkarị ụwa niile taa.
A kwadebere ma nye ozi a niile, dị ka anyị kwuru na mbụ, site na ọnụ ụzọ mbata Statista, nke bụ onye na -akwado eziokwu nke anyị niile chere, a na -etinye teknụzụ na ihe ọ bụla ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ụlọ ọrụ teknụzụ, ndị kacha baa uru n'ụwa
Chọpụta onye na -eji ngwa ndị a esochi gị na Instagram